Valentine Albums | Myanmar Mp3 Album
Home / Valentine Albums
Category Archives: Valentine Albums
Tiffany EarringsTiffany & co Outlet
tiffany braceletstiffany banglestiffany&co earringstiffany necklacecheap tiffany pendantstiffany accessories
February 6, 2012 tonetone Valentine Albums Tiffany JeweleryTiffany EarringsTiffany & co OutletBuy Tiffanytiffany braceletstiffany banglestiffany&co earringstiffany necklacecheap tiffany pendantstiffany accessories Leaveacomment
songname : မင်းသဘော vocal : MC BayGyi.MC YanYan.မောင်သီဟ.Yo Yoe
September 4, 2011 yoyoe အဆိုတော် (ကျား) ၀ါသနာရှင် အခွေများ Myanmar Underground Valentine Albums MC BayGyi. MC YanYan. မောင်သီဟ. Yo Yoe Leaveacomment
၁။ ရင်ဆိုင်ကြပါစို့ – Lil ကောင်းမြတ် ၂။ နားလည်မှု – လင်းလင်း ၊ ချစ်သုဝေ ၃။ အနာဂတ်အချစ်အိမ် – ဆလိုင်း ၊ မီးနို ၄။ ရင်ခုန်သံအလွမ်းများ – Rဇာနည် ၊ ချမ်းချမ်း ၅။ ရင်ဘတ်ကလူ – Lလွန်းဝါ ၆။ အချစ်လျော့မှာစိုး – နီတာ ၊ အေသင်ချိုဆွေ သီချင်းဒေါင်းရန် Download Link 01 Yin Sai Kya Par Soe – Lil Kaung Myat 02 Nar Lae Mhu 03 A Nar Gat A … Continue Reading →
February 17, 2011 htoo htoo အခွေ (အများ) နီတာ အေသင်ချိုဆွေ ကောင်းမြတ် ချစ်သုဝေ ချမ်းချမ်း လင်းလင်း Lလွန်းဝါ Media Myanmar Artist New Myanmar Albums Rဇာနည် Valentine Albums ဆလိုင်း၊ မီးနို4Comments
မွေးနေ့ (9 Night – 2)
01 ရွေး- ရသ၊ ဘိုလေး၊ ချမ်းအေးဝင်း 02 တစ်မျိုးကြီး- ချမ်းအေးဝင်း၊ အိမ့်ချစ် 03 ငါနင့်ကိုမုန်း.ချစ်တယ်- ဇင်မင်း၊ ဝေယံ 04 မွေးနေ့- ကိကိ၊ Bunny Phyoe 05 မင်းအကြိုက်ငါ့အကြိုက်- N-Zai၊ Phyo Wai 06 အဝေးက- ဘိုလေး 07 ဘယ်လိုမေ့ရမှာလဲ- ကိကိ၊ MTD 08 နိဂုံးချုပ်အချစ်- ရသ၊ ကိုဝိုင်း 09 မုန်းနေလားပြော- Cyclone 10 က- အနဂ္ဂ 11 အကြီးကြီး…ပျော်တယ်- Snare 12 အရုပ်- Ar-T 13 မကဲပါနဲ့- One Way Whole Album Download With Mediafire … Continue Reading →
February 16, 2011 MyanmarHipHopChannel.Com ဘိုလေး အနဂ္ဂ အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) ရသ ချမ်းအေးဝင်း Myanmar Artist New Myanmar Albums Valentine Albums Leaveacomment
U.N.C : Valentine Day Special
1. ခေါက်ရိုးကျိုးအိပ်မက် (Feat- Ba kone, မှုံကြီး ) Mediafire Hulkshare 2. အဖြူအစိမ်းလေးနဲ့ ကောင်မလေး Mediafire Hulkshare 3. မျှော်လင့်ချက် (Feat- Ye’ Wint, No Two & Ye’ Kyaw Thu) Mediafire Hulkshare 4. အချစ်ရှိရာ (Feat- Sparrow & Bay Gyi) Mediafire Hulkshare 5. Your Beautiful Red Lips Mediafire Hulkshare 6. မိုးသားထက်က (Feat- Bay Gyi) Mediafire Hulkshare 7. အဖြည့် ခံ (Feat- … Continue Reading →
February 12, 2011 MyanmarHipHopChannel.Com အခွေ (အများ) Media Unreleased Albums Valentine Albums Leaveacomment
All Songs Of Bunny Phyo(Last Updated)
01 -Bad Girl(Bunny Phyo feat MC Freddy) 02-မသိချင်ယောင်ဆောင် မျက်နှာလွှဲ-Bunny Phyo& Ki Ki 03 -Stay With Me 04 -ချစ်တယ်ဟုတ် 05 -နှစ်ပတ်လည် 06 -ဆုတောင်းပေးမဲ့သူ 07 -ဘာတွေဖြစ်ဖြစ် 08 -မချစ်လို့မှ မဟုတ်တာ(feat Jumpa) 09 -မထင်ခဲ့ဘူး(feat Htein Win) 10 -ယုံကြည်ပေးပါ 11 -လမ်းမထက်က ဘ၀(feat Satan & Player K) 12 -ဟိုအရင်လို(Remix)(feat Htein Win) 13 -ဟိုအရင်လို 14 -အလွမ်းပြေအနမ်း 15 -ဖြေရှင်းချက်(feat Extra T) 16-မဖြစ်သင့်ဘူး(Bunny ဖြိုး … Continue Reading →
December 21, 2010 MyanmarHipHopChannel.Com ထိန်ဝင်း Bunny Phyo MC Freddy MHC SZ Valentine Albums3Comments
Nice R&B Songs Collection(1)
(၁)ငါ့ဘဝ-သားကြီး (၂)ဘယ်မှာလဲ-Mi Sandi (၃)လက်ခံပါ-Mae Lay (၄)အကောင်းအဆိုး-B Clipz (၅)မမုန်းလိုက်နဲ့(SZ Feat Bunny Phyo) (၆)ဖြေဆေး-ဝေဝါး feat မွန်မွန် (၇)အချစ်သီချင်း-ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း& Sandi Myint Lwin (၈)မင်းအနားအတူတူ-MichaeL Feat. MHL, Young K (၉)ငါ့နေရာ-ဇေရဲ&ရဲရင့်အောင် (၁၀)မမ -Double Nyi&TG (၁၁)အေးစက်သောနွေ-ဇေရဲ&Myo G (၁၂)ဒီဇင်ဘာညနေ-သင်းသီရိလှိုင်&Hemale (၁၃)ပြန်ဆုံမဲ့နေ့-Cykolamp&Hrayz (၁၄)Stop Love-သားသား (၁၅)Never To Never-MC Yan Yan (၁၆)Don’t Go-ရဲရင့်အောင် (၁၇)Procold-သူရနိုင်&ရန်လင်း(HTS Family) (၁၈)She’sagold Digger-သိန်းလင်းစိုး All Songs Download With Hulkshare User Term & Condition … Continue Reading →
December 21, 2010 MyanmarHipHopChannel.Com အခွေ (အများ) သားကြီး Bunny Phyo MHC Valentine Albums 1 Comment
Hip Hop & RNB Songs I Like(Collection)
အားလုံးကြိုက်ကြမယ်ထင်တဲ့သီချင်းလေးတွေ စုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် (၁)နင်ပျော်လား-ထိန်ဝင်း,သားကြီး& Ah Boy (၂)မေ – တိုက်ဂေါ & ဝီရ (၃)အလွတ်သာပျော်-Player K feat Mi sandi (၄)တိုတိုတုတ်တုတ် (၅)ကိုယ့်အထာနဲ့ကိုယ်နေ -ရသ feat Bigg Y (၆)အခန်း-Bro G (၇)ဂဠုန်လားနဂါးလား-စေတန် feat ဒိုးဒိုး (၈)Never Come Back-သားကြီး (၉)Rap N Roll-စိုင်းစိုင်း,ဖြိုးကြီး & အာဇာနည် (၁၀)To Da Floor – Ar T (၁၁)Never Say Goodbye-A Grid Download All Songs With Up4vn up4vn contains mediafire,ifie,rapidshare ..etc Download All … Continue Reading →
December 17, 2010 MyanmarHipHopChannel.Com အခွေ (အများ) ထိန်ဝင်း ရသ သားကြီး AH.BOY BiGG-Y J-Me MHC Rဇာနည် Valentine Albums 1 Comment
မသီချင်းတွေပဲလုပ်နေတော့ ညီမလေးအတွက်လုပ်ပေးပါဆိုလို့ ရှိတဲ့ ညီမလေးသီချင်းတွေကို စုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် (၁)ညီမလေးရေ (သားစိုး) (၂)ညီမလေး (Unknown) (၃)ညီမလေး(4-SHIKENS) (၄)ကိုကြီး ညီမလေး (Examplez feat ဘာဘူ) (၅) ညီမလေး(Min htut၊aung Thu ၊ Yuya) (၆)ငါ့ရဲ့ညီမလေး(ကြက်ဖ) (၇)ညီမလေး (Thein Htike feat:Jumpa) (၈)ညီမလေးအတွက်(ရဲလေး)
May 7, 2010 MyanmarHipHopChannel.Com ဘာဘူ အခွေ (အများ) ရဲလေး သားစိုး ကြက်ဖ Example Unreleased Albums Valentine Albums 13 Comments
Valentine Day (MHK,Jumpa,tayza MC,KZ)
ဒီသီချင်းလေးကောင်းတယ်… နားထောင်ကြည့်ကြနော်…. hiphopတွေအသစ်ထွက်တိုင်း မပူနဲ့.. အားရင်အကုန်လုံးကိုပေးမယ် …… mediafire
February 15, 2010 [email protected] Unreleased Albums Valentine Albums Tay Za MC7Comments